Lix cudur oo lagu kala qaado shumiska ama baashida. digniin | shumis.net
Home » galmada » Lix cudur oo lagu kala qaado shumiska ama baashida. digniin
Lix cudur oo lagu kala qaado shumiska ama baashida. digniin
Shabakadaan oo mar walba u taagan ka haqabtirka waxa bulshada ka qarsoon ayaa maanta waxey idiin soo gudbineysaa 6 cudur oo lagu kala qaado shumiska ama baashida. hadaba iska jir ninyahow ama naagyahey qofkaad aragtaba ha iska shumin ama baashiyeynin hadii kale gadaal ayaad ka shalayn doonta ama is weydiin doontaa tolow cudurkaan intow iiga yimid.
Hargabka wuxuu ka mid yahay cudurada sida sahalka lisugu gudbiyo waxaad na ka qaadi karta iska naa inaa shumisee asagoo qofka kugu neefsado xitaa.
Glandular fever ama loo yaqaan mononucleosis waxaa lagu kala qaada shumis-ka qaas ahaan shumiska loo yaqaan franch kiss. cudurkaan ayaa laga qaadaa qof qabo adigoo nuuqa kadib dhacaankiisaa afka kuu galo kadibna liqdo.
Cudurkaan asagana waa cusub afka ku dhaco ama soomaalida ee u taqaano biijo. waxaa lagu kala qaadaa asagana inaad shumiso qof qabo. cudurkaa oo sababo virus bakteri ku dhaca dadka sifiican u cadayeysan ama ku yar yahay vitamin C-ga ayaa asaga lisugu gudbiyaa baashida .
Cudur kaan oo asagana sabab virus ka loo yaqaan HPV ayagaa
lisugu gudbiyaa baashida. cudurkaan oo ku dhaca inta badan maqaarka ayaa asagana si sahal lisugu gudbiya adigoo baashiyeeya ama faruuraha ka dhuuqa qof qaba cudurkaan aadan ka filaneynin inuu qabo.
Cudurkaan ayaa asagan lisugu gudbiyaa maashida siiba qofka qabo markaad ka dhuuqdo bishimaha gaar ahaan marka dhiig ka yimaado qofka qabo cudurkaas kadib si sahal ayuu kuugu gudbaa cudurkaa.
Cudurkaan waa cudur ku dhaca ilaa maskaxda waxaana lisugu gudbinkaraa baashiyeenta ama shumis ka gaar ahaan markaa laqdo dheecaanka qufkaad baashiyeyneyso.
Shumiska waa wax kamid ah raaxada dad badan ay jacel yihiin balse waxaa wanaagsan qofka kuu xalaasha un inaad ku ekaato aada isku shumis qof laba habeen kaliya is taqaanaan.
lasoco barnaamijyadeena danbe aan ku soo qadan dooro mowduucyo xiisa badan:
waxaan filayaa inaad ka faaideysatay 6 cudur oo lagu kala qaado shumiska amaa baashida.
Title: Lix cudur oo lagu kala qaado shumiska ama baashida. digniin